In la yimi Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / In la yimi Iswiidhan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 10 7 2018
Marka aad timaado Iswiidhan waa inaad isla markiiba codsataa magan-gelyo.
Haddii aad la kulanto booliiska xuduudaha marka aad timaado Iswiidhan
Haddii aad la kulanto booliiska xuduudaha marka safar ku soo gashid Iswiidhan waa inaad iyaga u sheegtaa in aad doonaysid inaad codsatid magan-gelyo. Booliiska xuduudaha waxay joogaan tusaale ahaan meesha lagu kantaroolo baasaboorada ee eerbooryada, xarumaha gaadiidka badda iyo meelaha ay ku soo dagaan tareenada iyo basaska yimaada Iswiidhan. Booliiska xuduudaha waxay ku weydiin doonaan dhowr su'aalood. Ka dib ayaad adigu la kulmaysaa Hey'adda Socdaalka taas oo kaa qaban doonta codsigaaga magan-gelyo.
Haddii aanad la kulmin booliiska xuduudaha markaad timaado Iswiidhan
Haddii aad joogto Iswiidhan waa inaad adigu la xiriirtaa Hey'adda Socdaalka.
Waxaad ka codsan kartaa magan-gelyo Hey'ada Socdaalka oo ku taala Göteborg, Malmö, Stockholm, Boden, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala iyo Örebro.
Xiriirada bogagga internetka ee kale
Akhri dheeraad ku saabsan in la yimaado Iswiidhan oo ku qoran Hey'ada Socdaalka bogeeda. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi. Eeg cinwaanada Hey'adda Socdaalka xarumaheeda la iska dhiibo. Warbixintan waxay ku qorantahay oo keliya iswiidhish iyo ingiriisi.